यी यात्रुले अब तिमीहरु सबैको मृत्यु हुन्छ भन्दै मास्क निकालेर खोकिदिएपछि विमानबाट झारियो !:: Naya Nepal
काठमाडौं । विश्वभर कोरोना महामारीको डर कतिसम्म छ भन्ने पछिल्लो उदाहारण फेला परेको छ । एक उडानका क्रममा एक माक्स नलगाएकी यात्रुले खोक्दा विमानबाट निकालिएको छ । बेलायतमा बेलफास्टबाट एडिनबर्ग उडानको क्रममा यो घटना घटेको थियो ।
इजि जेट विमानबाट उडानको बीचमा उनलाई आइतबार ट्यान्ट्रम फ्याँकेको भिडियो बाहिर आएको छ । भिडियोमा एक जना महिलाले आफ्नो ज्याकेट र सामानहरू विमानबाट बाहिर निकाल्दै गरेको देखाइएको छ । त्यसपछि उनी यात्रुहरूलाई गलत व्यवहार गर्न शुरू गर्छिन् ।
ती महिला अझै भन्छिन्, ‘सबैजनाको मृत्यु हुन्छ, के तिमीलाई थाहा छ ? प्रत्येक मान्छे जन्मेपछि मृत्यु हुन्छ नै । तर यो कोरोनाबाट हो वा सबैजनाको मृत्यु हुन्छ नै ।’ एक कर्मचारी त्यसपछि ति महिलासम्म पुग्छन् जब उनी विमानबाट बाहिर निस्कन हिड्न सुरु गर्छिन् ।
उनी आफ्नो दायाँतिर फर्किन्छन् र अन्य यात्रुहरुलाई लक्षित गरेर अध्याधिक खोक्न सुरु गर्छिन् । यात्रुहरू उनलाई पछाडि हट्न भन्छन् तर ति महिला सबैजनाको मृत्यु नजिक आएको छ, कुरा यति मात्र हो भन्दै अगाडि जान थाल्छिन् ।
महिलालाई त्यसपछि कर्मचारीले रोक्दै विमानबाट झर्न भनेका छन् । कर्मचारीले महिलालाई विमानबाट झर्न भन्दै संकेत गर्छन । यसको जवाफमा ति महिला कर्मचारीलाई पनि तथानाम व्यवहार गर्न थाल्छिन् ।
उनले कर्मचारीलाई आशा गर्दछु तिमी नै पहिले मृत्युमा पुग्नेछौ । भन्दै अनेक हर्कत देखाउँछिन् । महिला त्यसपछि विमान बाट झरेर क्यामेराबाट हराउँछिन् ।
जानकारी अनुसार महिलालाई विमानबाट बाहिर लगियो । उनको यो हर्कत उनका साथी यात्री नोएल स्मिथद्वारा खिचिएको थियो । जसले भिडियो क्याप्शनको साथ साझा गरेका छन् । उनले क्याप्शन लेखे, ‘यस्तो भर्खर मेरो उडानमा भयो’ यस भिडियोले सामाजिक सञ्जालमा हंगामा मच्चाएको छ ।
कान्छि आमासँग राजाले राखे सम्बन्ध, षड्यन्त्रपुर्वक गरियो हत्या, बस्यो अचम्मको परम्परा